တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အဖေပြောတဲ့ ကဗျာပုံပြင် (၃)
လောလောဆယ် စာအသစ်မရေးဖြစ်တာက တကြောင်း၊ အဖေ့ကဗျာလေးတွေ မတင်ရတာကြာပြီက တကြောင်းကြောင့် ဒီနေ့တော့ အဖေပြောတဲ့ ကဗျာပုံပြင် လေးကို တင်လိုက်ပါတယ်။ မေလ ၂၁-ရက်နေ့က ကဗျာပုံပြင် (၁) ဖြစ်တဲ့ “လူမိုက် ကျေးဇူးမသိဘူး” ကို တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇွန်လ ၁၇-ရက်မှာတော့ ကဗျာပုံပြင် (၂) ဖြစ်တဲ့ “တလမ်းသွား” ကိုတင်ခဲ့တယ်။ ဒီကနေ့ တော့ ကျန်နေသေးတဲ့ “အရေအတွက်မဟုတ် အရည်အချင်း” ဆိုတဲ့ ကဗျာ ပုံပြင်ကလေးရဲ့ အလှည့်ဆိုပါတော့။ စာအုပ်မှာ အဖေရေးထိုးထားတဲ့ ရက်စွဲအရ ၁၉၇၅-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက ရေးခဲ့တဲ့စာမို့ ဒီစာအုပ်ရဲ့ သက်တမ်းက အနည်းဆုံးတော့ နှစ်ပေါင်း ၃၂-နှစ် လောက် ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်ကလေး ဟာ ကျမလက်ထဲမှာ အကောင်းပကတိ ရှိနေဆဲပါပဲ။
ပစ္စည်းသင်္ခါရ၊ လူသင်္ခါရ ဘယ်အရာမှ မမြဲတဲ့ လောကကြီးမှာ စာအုပ်ကလေး လည်း အနိစ္စသဘောနဲ့ ကိစ္စချောနိုင်တာမို့ စာအုပ်ကလေး မပျောက်ပျက်မီ အဖေ့လက်ရေးနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ ဒီစာအုပ်ပါ စာမျက်နှာတချို့ကို အမှတ်တရ အနေနဲ့ စကန်ဖတ်ပြီး ဘလော့မှာ သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။
တခါက ခြင်္သေ့မကြီး သားမွေးနေတယ်ကြားလို့ မာကြောင်းသာကြောင်း သတင်း မေးဖို့ မြေခွေးတကောင် ရောက်လာတယ်။
“ခြင်္သေ့မကြီးနှယ် .. လပေါင်းများစွာ ကိုယ်ဝန်ကို ပင်ပင်ပန်းပန်း လွယ်ထား လိုက်ရတာ … မွေးလာတော့လဲ တကောင်ထဲ …” လို့ မြေခွေးက ကဲ့ရဲ့လိုက် သတဲ့။
“ဟုတ်တယ် … တကောင်ထဲဘဲ … ဒါပေမဲ့ … ခြင်္သေ့လေး… လေ …” လို့ ခြင်္သေ့ မကြီးက ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
ပုံပြင်ကတော့ ဒါပါပဲ။ ကဗျာကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
မာကြောင်း သာကြောင်း သတင်းမေး။
သူကလေးက ခြင်္သေ့ပဲ …”
မှတ်ပါအမြဲ … မှတ်အမြဲ … ။
ကဗျာပုံပြင်ကလေးကတော့ ဒါပါပဲရှင်။ အဖေ့ရဲ့ ဒီမှတ်စုလေးထဲမှာ ကျမဘလော့ အတွက် ယူစရာတွေ ကျန်ပါသေးတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
Posted by မေဓာဝီ at 3:20 AM
ဟိုတုန်းက လူကြီးတွေ လက်ရေးက အခုခေတ်လူငယ်တွေလို မဟုတ်ဘူးနော်။ အရပ်ရှည်ရှည်လူနဲ့ တူတယ်။ :D မမေလက်ရေးကတော့ ပုပုညှက်ညှက်လူနဲ့ တူတယ်။ :P ဦးပြောတဲ့ ကဗျာပုံပြင်ပြီးရင် ဘုန်းဘုန်းပြောသော ပုံပြင်လဲ တင်အုံးနော်။ :)
9/07/2007 4:04 AM
ေ၇းချင်တာသာေ၇းပါ... သက်သေတွေထူမနေနဲ့..
မူယာမာယာ ပိုတာ လူသိသာပါတယ်...
အဖေဘဲေ၇းေ၇း ... အမေဘဲေ၇းေ၇း ... ၇ည်းစားဘဲေ၇းေ၇း .... ဦးတည်၇ာ က တမျိုးတည်းမို့ သိပ်မထုးပါ ...၃၂နှစ်စာအုပ်အေ၇ာင်ကဒိထက်ဝါကျင်နေသင့်တယ်....
9/07/2007 4:58 AM
Dear Ma Maydar wii,
Can you do meafavour?Plz mention 'Shin thar Rakhine tasaung law ' by Shin Tayzaw Thar Ra if you have.I mean 'Chote nyi ye twin phyote chee myin thee..Shin thar Rakhine tasaung law'...I hope you can understand my burglish...thankx and carry on your blog for your numerous readers....regards...Zar Ni Ko
9/07/2007 5:24 AM
Thanks for this story (pone pyin) ma may.:D
ဘယ်နားမှ အကောင်းမမြင်။ ။
ဆဲချင်ပေါ့ နင့်စိတ်ထား။ ။
9/07/2007 9:08 AM
ဟဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်၇ဲ့လင်ငယ်အကောင်
အခုလည်းသူများနိင်ငံမှာသွားပြီးကျွန်လုပ်နေတာ မဟုတ်လား ၀ါးဟားဟား
9/07/2007 9:23 AM
မြသားစစ် အသက်ရာ။ ။
နင်နေတာက ကုလားပြည်ထဲ။ ။
9/07/2007 9:59 AM
why u are accusing me.. i didnt sayaword to u.. not evenaword and comment either. i'm just sick of it. so please saying bad word to me. i dont want to fight with you. if i want to fight i will send emial to u as u gave. behave your self.. you become psychopath.
တဦးတည်းသော အမျိုးယုတ် သစ္စာဖောက်မဟာ
မြသားစစ်ဆိုတဲ့ နင်တယောက်ထဲကိုပဲ ငါပြောခဲ့တာ
နင့်သဘောထားမဟုတ်ရင် ဘယ် ကလေကချေမ
ဟုတ်ရမှာလဲ… မင်းနုပါသေးတယ်… ကြိုးစားလိုက်အုံး
9/07/2007 11:13 AM
if u are not dare just send mail to me. sitthamee@gmail.com
ဟောဟိုက gmail ကို ကိုယ့် gtalk မှာ..
ပြလိုရင်ဖြင့်… နှမအလိုကျ… ဟ အကိုက
9/07/2007 11:37 AM
ရီရတယ်။ မမေကဗျာတောင် လယ်ရော၈က်သွားမှန်းမသိဘူး။
9/07/2007 6:16 PM
Are you happy? Arn't you?
Keep enjoy yourself and your job!!
9/07/2007 10:53 PM
Please read it!http://klosayhtoo.blogspot.com/2007/09/blog-post_05.html
9/07/2007 11:26 PM
အသဲတသောင်း ပိုင်ရှင်မ တောင်မှ
ကြမ်းဆိုသမျှ ထိပ်ခေါင်မှူး။ ။
အနုသယ ကလိုမှာ တမူကျွေးမှာမို့
ကံကြမ္မာ စန်းတက်တဲ့ ကလိုမှာဖြင့်
9/08/2007 2:26 AM
9/09/2007 3:53 PM